Meet Pyay Khaing
Empowering LIVES Everyday
U Pyay Khaing worked over 8 years asaConsultant in Multi-National Corporation (MNC) like IBM, HP, DBS Bank in Singapore. During these time, He acquired Technical Skills, Leadership, Finance, Economic, Education, Psychology(NLP) skills. He also has spoken, coached and trained in Sydney, Singapore, Vietnam, Malaysia, and Myanmar.
He also works together and learned with most famous Speakers, Trainers, Leader in the world like Tony Robbins, Sir Richard Branson, Dr. John C Maxwell, Robert Kiyosaki, T Harv Eker, Blair Singer, Steve Wozniak ( Apple Co-Founder ).
ဘယ်တော့မှ မရပ်ဘဲ သင်ယူသွားပါ ဆိုတာကို အကြိုက်ဆုံး ပါဘဲ။ ဒီသင်တန်းကို တက်လိုက်ခြင်းကြောင့် ရှေ.ဆက်ရမယ့် ဘဝရဲ. ရည်ရွယ်ချက်တွေ ၊ လမ်းကြောင်းတွေ ပိုပြီး ပီပြင်လာပါတယ်။သင်ကြားပေးတဲ့ ဆရာများကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
OTCP Manager Mega Lifesciences Ltd.
Presentation Skill တွေ အရမ်းကို ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို မသိတာတွေ အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေတာတွေ ၊ သတိမထားမိတာတွေ အားလုံးကို သင်ယူရရှိခဲ့လို. အရမ်းကို အားရ ကျေနပ်မိပါတယ်။ ရင်ဘတ်ချင်းနီးအောင် ၊ Heart to Heart ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်ဆိုရင် အကြိုက်ဆုံးပါဘဲ။
CEO, ~ Aung Gyi Group of Companies
ဒီသင်တန်း အတွက် ပေးလိုက်ရတဲ့ အချိန်က ခဏလေးပေမယ့် တော်တော်များများ ကျွန်တော့် အတွေးတွေ စိတ်ကူးတွေ ပွင့်ထွက်ကုန်တယ်။ ဆရာ အရှေ.ကပြောနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတွေက ဒါတွေပါလားဆိုတာ ဒိုင်းကနဲ ဒိုင်းကနဲ ထွက်လာတယ်။ သင်တန်းပြီးတဲ့ နောက်နေ.မှာပဲ ဝန်ထမ်းတွေကို လူမှန်၊ နေရာမှန် ရောက်အောင် Organization Structure ပြန်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
Managing Director TECHNO Engineering & Associates Co., Ltd
PYAY KHAING IN SOCIAL MEDIA